Shirweyne ka furmay balliga Jedalow oo u dhaw deegaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug. – Radio Daljir
Diseembar 23, 2012 11:26 b 0
Bacaadweyn, Dec, 23-? Waxaa maaanta balliga Jeedalow oo 8km u jira deegaanka Bacaad weyn ee gobolka Mudug ka furmay shirweyne wada tashi ah kaasoo ay isugu yimaadeen waxgaradka beesha Fiqi Xirsi oo isaga kala yimid gobolada dalka iyo daafaha dunida? iyo indheer garad kale oo ka kala yimid gobolka Mudug.
Shirkaas oo maanta la daah-furay ayaa waxaa ka qayb galay wafdi uu hogaaminayay Islaan Bashiir Islaan C/dulle kaasoo qayb ay ka ahaayeen gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac (Tigey), duqa Gaalkacyo Siciid Cabdi Faarax iyo gudoomiyaha deegaanka Bacaad weyn.
Shirkani oo muddo socon doona waxaa si rasmi ah u furay Islaan Bashiir Islaan C/dulle, islaan Bashiir ayaa halkaasi ka muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay shirkaasi isagoo ka qayb galayaashana kula dardaarmay inay soo bandhigaan waxyaabo muhiim u ah dadka iyo deegaanka, wuxuuna sheegay inuu yahay shir qiimo leh.
Furitaanka ka dib waxaa si toosa loo gudo galay khudbadihii iyo qodobaddii shirka kuwaasoo ay ugu waaweynaayeen ka hadalka nabadaynta gobolka, isku duubnida bulshada,ishkaashiga dhinacayada waxbarashada iyo ganacsiga iyo isu soo dumida beelaha gobolka, iyo waliba wada xaajood ka dhex dhasha beesha fiqi xirsi iyo qodobo kale.
Ugu horayn waxaa kulanka khudbad taabanaysa ujeedka kulanka halkaaasi ka jeediyay Bashiir Cabdulle oo ahaa Shir gudoonka isagoo ka hadlay ajandaha shirkaasi kaasi oo ah mid ay wanaaga beesha Fiqi Xirsi kaga tashanayso hase ahaatee uusan ahayn mid cid wax loogu dhimayo.
Gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac oo ka mid ahaa masuuliyintii lagu casumay furitaanka shirka ayaa isaguna halkaasi ka jeediyay muhiimadda shirkani uu u leeyahay beesha soo qaban qaabisay iyo dadka kale ee ka qayb galay, Tigey ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda ay leeyihiin kulamada noocaan oo kalaa, isagoo intaasi ku daray inuu ka gudoomiye ahaan soo dhawaynayo.
Gudoomiyaha ayaa beelaha kale ee gobolka ku booriyay inay qabsadaan kulamo noocaana oo ay kaga hadlayaan aayahooda iyo hormarkooda dad iyo deegaan.
Shirkani maanta furmay ayaa qaban qaabadiisa waxay soo socotay muddo dhan 18 bilood iyadoona uu socon doono toddobaadyada soo socda.